विवाहपछि महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो ! – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on विवाहपछि महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो !
यसमा धेरै जसो महिला यस्ता हुन्छन्, जसले पछि गएर आफूले गरेको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्। कुनै समय त उनीहरुलाई विवाह गरेमै पछुतो हुने गर्दछ।यी कुरा सबै महिलामा लागु नहुनसक्छ तर बिभिन्न अध्ययनबाट धेरैजसो महिलालाई यी ५ कुरामा पछुतो हुने गर्दछ।
← दुई महिनाकी ग’र्भवती थिइन् सुदीक्षा, पतिको ह’त्यापछि विभिन्न व्यक्तिसँग फोनमा कुराकानी → घरमा उम्रने यो झार नफ्याँक्नुस्, यसमा हुन्छन् अनेकौं गुण